Fampidirana ny orinasa - Foshan Lingjie Pro Audio Co., Ltd.
Foshan Lingjie Pro Audio Co., Ltd. (nantsoina taloha hoe Guangzhou Lingjie Audio Co., Ltd.) dia natsangana tamin'ny taona 2003. Orinasa teknolojia avo lenta izy io mampiditra R&D sy famokarana sehatra matihanina, efitrano fihaonambe ary feo KTV. Izy io dia manolo-tena hanome tombony amin'ny marika, kalitao ary serivisy matihanina. Amin'izao fotoana izao dia namolavola fiaraha-miasa ara-teknika amin'ireo orinasa anatiny sy vahiny maro izahay. Miaraka amin'ny filozofia momba ny asa fitoriana sy fandrosoana sy fanavaozana, famolavolana vokatra tsy manam-paharoa, fitakiana kalitao ho an'ny hatsarana, ary fomba fitiliana henjana sy lavorary.
Amboary am-panazavana ireo vokatra am-peo marika matihanina fanta-daza tarihin'i TRS. Nandritra ny taona maro, i Lingjie dia nifikitra hatrany tamin'ny foto-kevitry ny marika "Famoronana rafitra fitaovana matihanina mety amin'ny olombelona", manambatra ara-organika ny fandrosoana ara-tsosialy, ny fampiroboroboana ny orinasa ary ny fanatsarana ny fahaizan'ny mpiasa, ary nandresy tamina "marika folo mpifaninana voalohany amin'ny fahazavana" sy ny Indostrian'ny Audio "ary ny" Guangdong Famous Enterprises "ary andiana loka maro.
Lingjie dia eken'ny mpampiasa an-trano sy any ivelany amin'ny alàlan'ny asa aman-draharaha matihanina, feno fanoloran-tena, marina ary manavao, vokatra mahomby, paikady henjana sy manara-penitra ary serivisy aorinan'ny varotra feno sy feno fiheverana. Ny vokatra, serivisy ary vahaolana dia misy fitaovana fanamafisam-peo karaoke, fitaovana fanamafisam-peo matihanina, mixer ary fitaovana peripheral ary sehatra hafa. Ny fivarotana sy ny serivisy dia nandrakotra ny ankamaroan'ny faritany sy tanàna any Shina, ary firenena sy faritra maro manerantany, ary manolo-tena hanome mpanjifa serivisy haingam-pandeha sy avo lenta.
Ny filozofianay momba ny asa aman-draharaha
Taorian'ny fanangonana sy fivoaran'ny taona an-tsehatra tao amin'ny indostria, Lingjie dia nitombo avy amin'ny ekipa kely misy olona vitsivitsy fotsiny ho an'ny vondrona efa ho 100 izao. Ny lazan'ny indostria koa dia mitombo isan-taona, ny fahombiazan'ny varotra dia nahitana vokatra tsara hatrany, ny fihodinan'ny taona 2020 dia nihoatra ny $ 15.000.000! Ankoatr'izay, ny tahan'ny fampiroboroboana ny varotra any amin'ny tsena ampitan-dranomasina dia miavaka manokana, izay tsy azo sarahina amin'ny filozofianay momba ny "fanoloran-tena tsy tapaka amin'ny marika, kalitao, matihanina ary serivisy".